အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မင်္ဂလာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့
22 Responses to “မင်္ဂလာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့”
ဖုနုးနဲ့ ရိုက်ထားတာတောင် တော်တော်လေး ကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ်...။ ဘုရားတွေ
ကိုလည်း ဖူးသွားပါတယ်... ကြည်နူးမှုတွေလည်းရသွားပါတယ်...။
မချောလည်း နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ၊
မချော ဖေဖေ မေမေနဲ့ မိသားစုအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
(စာလုံးပေါင်းကမှားသွားလို့၊ မချော အဲဒါကြောင့်comment ဖျက်လိုက်တာနော်၊)
ဘုရားတွေ ဖူးရတာ ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်ရှင်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တောင် ဘုရားသွားကျောင်းတက်မလုပ်နိုင်ဘူး မချောရေ။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
ဒီကိုလည်းလာလည်ဦးနော် မချောရေ။ >> www.moba4all.org မှာလည်း လာရောက်ဝေမျှရေးသားပေးပါဦးနော်။ မျှော်နေမယ်နော်။
တစ်ထိုင်တည်း ဘုရားတွေ ဖူးလိုက်ရလို့ 
နှစ်သစ်နှစ်ကူးမှာ မင်္ဂလာတစ်ပါး ဖြစ်ရပြီ။
ရှေ့ ရှောက် ဒီထက် အောင်မြင်ပါစေဗျာ...။
မမ ကတော.ညီမလေး၇ဲ. စာဖတ်ပ၇ိတ်သတ်တစ်ဦးပါ။ အမိမြန်မာပြည်ကဘုရားတွေကို ညီမလေးက အကုန်လုံးတင်ပေးလိုက်လို. ဥဒီသ၇ည်မှန်းပြီး ကန်တော.လိုက်၇ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြုလုပ်ပေးတဲ.အတွက်ကြောင်.နှစ်သစ်မှာ လိုအင်တွေအားလုံးပြီးပြည်.စုံပါစေလို.ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မင်္ဂလာနှစ်ကူးပါနော် လာရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ် ညီမ ပုံတွေကလည်းကောင်းပါတယ်
Thank you for sharing those pictures, Chaw!!!
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာ အဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ မချောရေ..
စေတီတော်တွေ ရုပ်ပုံတော်တွေ ကြည်ညို သွားပါတယ်..
ကျေးဇူးဗျာ ကျွန်တော်တို့လို့အဝေးရောက်တွေအတွက်တော့ အတော်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့
လုပ်ဆောင်မျှဝေမှုလေးပါပဲဗျာ.. ဘုရာတွေဖူးသွားပါတယ် အစ်မလည်း နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...လို့ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အစ်မချော...ဘုရားဖူးပြီးပြန်သွားပြီ :)ကျေးဇူးတင်ပါ၏ :)
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ... အမရေ...
နှစ်သစ်ကစလို့ ကျန်းမာရွှင်လန်း စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအပ်သောဆန္ဒတွေအားလုံး
ချော နေကောင်းလား မတွေ့တာကြာပြီ မှတ်မိပါသေးရဲ့လား...နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေနော်...စာကြွေးတွေ လည်းကျန်သေးတယ်...ခုတော့ ဘုရားတွေကို လာရောက်ဖူးမျှော်သွားပါတယ်...ချောလက်ကိုင်ဖုံးက ဘယ်လောက်တန်လဲဟင်...(နည်းနည်းနှောနှောပိုက်ဆံနဲ့တော့ မရလောက်ဘူး)ပုံထွက်ကောင်းလိုက်တာနော်...ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
ချော နဲ့ မိသားစု နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
အားရပါးရ မြန်မာပြည်တစ်လွှားကို ဘုရားတွေကို ဖူးမြှော်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သွားဖူးရသလိုပါဘဲ။
ဘုရားအစုံဖူးခွင့်ပေးတဲ့ မချောတယောက် နှစ်သစ်မှ“စ”လို့ ဘေးရန်အပေါင်းကင်းရှင်းပြီး လိုအင်ဆန္ဒ တလုံးတဝပြီးပြည့်စုံပါစေ...။